IiMounts zodonga lweTV yeUniversal
I-Tilt ye-TV ye-Wall ye-Mounts
IiMount zodonga lweTV eshukumayo
IiNtaba zeCeiling zeTV
Ukubeka iliso kwiiArms
Iishelufu zeBhokisi ezimiselweyo
Zeziphi iintlobo zezibiyeli zikamabonakude ezihambayo?
Isitendi sikamabonakude esiphathwayo sisiqhelo seTV. Kubomi bethu, iTV ayinakwahlulwa. Xa sikruqukile, sithembela kumabonwakude ngexesha lokuphumla. Ukuba kukho iindwendwe ekhaya, ngaphezu kokusela iti yeendwendwe Ukongeza, umabonwakude nawo uyimfuneko. Umabonwakude unokusinceda sichithe ixesha. I...
igesi spring esweni kabini isibiyeli sengalo yesikrini
Ngaba kukho naziphi na iimfuno zokubonisa isikrini esweni? Emva kokususa isiseko sokuqala se-monitor, ubunzima kufuneka bube phakathi koluhlu lomthwalo we-bracket. Imonitha kufuneka ibe nomgangatho weVESA, kwaye ubungakanani bomngxuma wesikrufu bufana nqwa nomgangatho wamazwe ngamazwe (ngokuqhelekileyo iM4)....
Inqwelo yokuma yeTV ibambe izikrini ezimbini
Esi sibiyeli esinomthwalo esinesikrini esiphindwe kabini siyilwe ngefowuni eyodwa negqibeleleyo esongwayo. Umgangatho weTV, indawo yokuma yenqwelo yeTV ephathwayo Isonga imithwalo, igcina kwaye iyathutha, itekhnoloji yokufunxa imilo kunye nesixhobo esinye, ikholamu enzima ephindwe kabini, kunye nesakhiwo sesitshixo, esi...
ngu admin on 21-04-26
I-Zeno eHongkong Spring Electronics Fair, ebanjwe yiBhunga loPhuhliso lwezoRhwebo lwaseHong Kong. Siyishishini eligxile kwi-R&D, imveliso kunye nokuthengisa izixhobo ze-audio-visual peripheral. Sibandakanya i-R&D, itekhnoloji, imveliso, umgangatho, ukuthengisa, inkonzo emva kokuthengisa kunye nokunye ...
ICanton Fair 2020 (ngo-Okthobha, ekwindla) – uMbono we-126 waseTshayina wokuNgenisa nokuThumela ngaphandle kowama-2020
Abathengi abambalwa beza kunye nomthamo wezivumelwano zehlile ngokuwa kwalo nyaka iCanton Fair, esona siganeko sikhulu sorhwebo eTshayina kabini ngonyaka, kodwa izinto zaqala ukujonga phezulu njengoko i-China kunye ne-US zisondela ekupheliseni imfazwe yazo yeenyanga ezili-18. Enye imbalasane yomboniso wokuwa ibe kukunyuka kwama-40% kwii-odolo ezivela kwi-S...
2020 iHong Kong Electronics Fair 2019 (uHlelo lwasekwindla)
IHong Kong Electronics Fair 2019 (uHlelo lwasekwindla) ibingumboniso obalaseleyo. Ababonisi apha babonisa ushicilelo lwe-3D, i-AI kunye nokuqatshelwa kwe-vice, i-AR, i-VR, iimveliso ze-audiovisual, i-automotive kunye ne-electronics emotweni, izincedisi zombane, imidlalo ye-elektroniki kunye ne-esports, iinkonzo zokwenza i-electronics, kunye ne-mor...
IQimeng Chuangye Square, iSithili sasePanyu, kwisiXeko saseGuangzhou, kwiPhondo laseGuangdong, eTshayina